Internetku wuxuu si habboon ugu sharraxayaa bot-yada inay yihiin barnaamijyo barnaamijyo software ah oo ka shaqeeya hawlo otomaatig ah shirkadaha shirkadaha internetka. Bootooyinku way jireen in muddo ah hadda, waxayna ka soo baxeen wixii ay markii hore ahaan jireen. Bootooyinka hadda waxaa loo xilsaaray inay qabtaan hawlo fara badan oo loogu talagalay liiska warshadaha kala duwan. Iyadoo aan loo eegin haddii aan ka warqabno isbeddelka ama in kale, botsku waa qayb muhiim ah oo ka mid ah isku-darka suuq-geynta hadda. Bots
Soo-gaadhista la mid maaha Saamaynta: Waa Waqtigii la Joojin lahaa Isticmaalka Dareenka si loo Qiimeeyo Qiimaha
Waa maxay Impressions? Aragti waa tirada isha ee laga yaabo inay ku dhacdo sheekadaada ama boostadaada bulshada iyadoo lagu saleynayo akhristayaasha / daawadayaasha shabakada / isha. Sannadka 2019, aragtiyaha qolka ayaa laga qoslayaa. Maaha wax aan caadi ahayn in lagu arko aragti balaayiin ah. Waxaa jira 7 bilyan oo dad ah oo adduunka ah: illaa 1 bilyan oo iyaga ka mid ah ma haystaan ​​koronto, inta badanna kuwa kale dan kama lihi maqaalkaaga. Haddii aad haysato 1 bilyan oo aragti ah laakiin aad ka baxdo
Talaado, Janaayo 22, 2019 Talaado, Janaayo 22, 2019 Douglas Karr
Mararka qaar erayga carqalad ayaa leh macno taban. Ma aaminsani in suuq geynta dijitaalka maanta ay carqaladeynayso tiknoolajiyad casri ah, waxaan aaminsanahay in lagu sii wanaajiyay. Suuqleyda la qabsiga iyo qaadashada teknoolojiyada cusub waxay awoodaan inay shaqsiyeeyaan, galaan, lana xiriiraan rajadooda iyo macaamiishooda siyaabo badan oo macno leh. Dufcadii iyo maalmihii qaraxu way gadaasheen gadaasheena maaddaama nidaamyadu ay ku fiicnaadeen beegsiga iyo saadaalinta dhaqanka macaamiisha iyo ganacsiyada.
Ha u oggolaan in Bots ay u hadlaan Astaantaada!
Jimco, Juun 1, 2018 Sabti, Febraayo 13, 2021 Tara Kelly
Alexa, oo ah kaaliyaha shakhsi ahaaneed ee codka leh ee Amazon, wuxuu wadi karaa in ka badan $ 10 bilyan oo dakhli ah dhowr sano gudahood. Horraantii Janaayo, Google waxay sheegtay inay iibisay in ka badan 6 milyan oo qalab Google Home ah tan iyo bartamihii bishii Oktoobar. Kaaliyeyaasha caajiska ah sida Alexa iyo Hey Google waxay noqonayaan muuqaal muhiim u ah nolosha casriga ah, taasna waxay siisaa fursad la yaab leh oo loogu talagalay noocyada inay kula xiriiraan macaamiisha barxad cusub. U hamuun qabashada fursaddaas, magacyadu way degdegayaan